BREAKING NEWS ..ရန်ကုန်လေဆိပ်…လမ်းချော်လို့… လေယာဉ် ..သုံးပိုင်းကျိုး.. – ရှအေလငျး
အ ထူး သ တင်း ရန်ကုန်လေဆိပ် ဘီမန်လေယာဉ်ပျံအဆင်း Cargo Terminal နားမှာ လမ်းချော်လို့ လေယာဉ် သုံးပိုင်း ခေါက်သွာတယ်။
လေ ယာဉ် မှုး ခေါင်းပေါက်သွားပေမယ့် ခရီးသည်တွေအန္တရာယ် မဖြစ်ဘူးလို့ကြားရတယ်။ တီဂျီ ဘန်ကောက်အပြန် နဲ့ တခြားလေယာဉ်တွေပျံတက်ဖို့ လောလောဆယ် ပြေးလမ်းပိတ်နေတယ်။
ဆင်း လာ မယ့်လေယာဉ်တွေ လမ်းခွဲပြီး တခြားလေဆိပ်ကိုဦးတည်နေကြပါတယ်။
[email protected] ကိုဇော် ဘန်ကောက်
Yangon International Airport ​လေယာဉ်​​ပြေးလမ်း​ချော်​ ဒဏ်​ရာ ရရှိသူများအား အ​ရေး​ပေါ် ကယ်​တင်​လျက်​ရှိပါသည်။
ရန် ကုန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ် လေယာဉ်ပြေးလမ်းချော် သုံးပိုင်းကျိုး ဟု ကနဦး သိရ။ဘင်္ဂလားဒေရ်ှလေယာဉ် လူနာများတယ် အကူညီတောင်းနာကူ(K Ambulance) ယာဉ်အုပ်စု (၃)စီးထွက်ခွာကူညီဟု ကနဦး သိရပါသည်။
‘Biman Dash8-q400; Airline’
Arrival time (6:50pm)တွင်​ Weather အ​ခြေ​အ​နေ မ​ကောင်းခြင်း​ကြောင့်​ Accident တစ်​ခုဖြစ်​ကာ သုံးပိုင်းကျိုးသွားမီးသတ်​ကားများနှင့်​ ကယ်​ဆယ်​​ရေးကားများ အချိန်​မှီ​ရောက်​ရှိ ….
ခရီး သည်​ များ အားလုံး ထိခိုက်​ဒဏ်​ရာမရှိဟု သိရ
​ပျံသန်းသွားလာ​သော ​လေယဉ်​များအားလုံး အန္တရာယ်​ကင်း​ဘေးရှင်းကြပါ​စေ
အထူးသတငျး ရနျကုနျလဆေိပျ ဘီမနျလယောဉျပြံအဆငျး Cargo Terminal နားမှာ လမျးခြျောလို့ လယောဉျ သုံးပိုငျး ခေါကျသှာတယျ။
လယောဉျမှုး ခေါငျးပေါကျသှားပမေယျ့ ခရီးသညျတှအေန်တရာယျ မဖွဈဘူးလို့ကွားရတယျ။ တီဂြီ ဘနျကောကျအပွနျ နဲ့ တခွားလယောဉျတှပြေံတကျဖို့ လောလောဆယျ ပွေးလမျးပိတျနတေယျ။
ဆငျးလာမယျ့လယောဉျတှေ လမျးခှဲပွီး တခွားလဆေိပျကိုဦးတညျနကွေပါတယျ။
[email protected] ကိုဇျော ဘနျကောကျ
Yangon International Airport လယောဉျပွေးလမျးခြျော ဒဏျရာ ရရှိသူမြားအား အရေးပျေါ ကယျတငျလကျြရှိပါသညျ။
ရနျကုနျအပွညျပွညျဆိုငျရာလဆေိပျ လယောဉျပွေးလမျးခြျော သုံးပိုငျးကြိုး ဟု ကနဦး သိရ။ဘင်ျဂလားဒရျှေလယောဉျ လူနာမြားတယျ အကူညီတောငျးနာကူ(K Ambulance) ယာဉျအုပျစု (၃)စီးထှကျခှာကူညီဟု ကနဦး သိရပါသညျ။
Arrival time (6:50pm)တှငျ Weather အခွအေနေ မကောငျးခွငျးကွောငျ့ Accident တဈခုဖွဈကာ သုံးပိုငျးကြိုးသှားမီးသတျကားမြားနှငျ့ ကယျဆယျရေးကားမြား အခြိနျမှီရောကျရှိ ….
ခရီးသညျမြားအားလုံး ထိခိုကျဒဏျရာမရှိဟု သိရ
ပြံသနျးသှားလာသော လယေဉျမြားအားလုံး အန်တရာယျကငျးဘေးရှငျးကွပါစေ
၁၉နှစ် သားနဲ့ အင်းဝနေပြည်တော်ကို တည်ထောင်နိုင်ခဲ့သူ
ထိုင်းတွင် အသက် ၆ နှစ်အရွယ် အမွှာမောင်နှမအား မိဘဆွေမျိုးများကိုယ်တိုင် လက်ထပ်ပေး
“အဖေ့ရဲ့…ဖိနပ်စုတ်လေး … တစ်ရံ”
ပရိသတ်တွေသဘောကျနေကြတဲ့ ရဲကိုကိုနဲ့ မြူလင်းကိုကို တို့သားဖနှစ်ယောက်ရဲ့ကြည်နူးစရာ...